नयाँ मेडिकल कलेज नखुलेर विद्यार्थी... :: शोभा शर्मा :: Setopati
नयाँ मेडिकल कलेज नखुलेर विद्यार्थी विदेसिएको तर्क सही होइन
शोभा शर्मा काठमाडौं, असार २७
'एमबिबिएस पढ्न नपाएर धेरै विद्यार्थी विदेशिन्छन्। काठमाडौंमा मेडिकल कलेज खोल्न किन नदिने?'
यो डा. गोविन्द केसीको आलोचनामा सबभन्दा बढी सुनिने भनाइ हो।
मेडिकल कलेज चलाउन सम्बन्धन कुरिरहेका व्यापारीदेखि तिनलाई लाभ पुग्ने गरी कानुन ल्याउन खोजिरहेका प्रधानमन्त्री केपी ओलीसम्मले धेरैजसो भन्ने यही हो। नेपालमा सिट नपाएर बर्सेनि डाक्टरी पढ्न विदेश जाने विद्यार्थीलाई यहीँ रोक्न नयाँ मेडिकल कलेज खोल्न दिनुपर्ने उनीहरुको तर्क रहँदै आएको छ।
यो तर्क तथ्यांकबाट भने पुष्टि हुँदैन।
डा. केसीलाई गलत सावित गर्न प्रयोग गरिने यस्तो तर्कविपरित डाक्टरी पढ्न विदेश जाने विद्यार्थी संख्या पहिलेको तुलनामा घटेको छ। नेपालमै पनि डाक्टरी पढ्ने विद्यार्थी संख्या कम भएको विश्वविद्यालयहरूले बताएका छन्।
सबभन्दा पहिला विदेश जाने विद्यार्थी संख्या कति छन् हेरौं।
सन् २०१५ मा मुलुकभित्र २ हजार ९१ जनाले एमबिबिएस पढे भने ५ सय ५ जनाले बिडिएस। त्यो वर्ष एमबिबिएस र बिडिएस दुवैतर्फ विदेश पढ्न जानेको संख्या १ हजार ४ सय ६१ थियो।
प्रधानमन्त्री ओलीसहित मेडिकल कलेज चलाउन खोज्ने व्यापारीहरु यही तथ्यांक देखाउँदै विद्यार्थी विदेसिएको पुष्टि गर्न खोज्छन्। जबकि, यो आधा सत्य हो।
यो त्यति बेलाको तथ्यांक हो, जब विदेश पढ्न जाने विद्यार्थीले प्रवेश परीक्षा पास गर्नुपर्दैनथ्यो। विदेशी कलेजले भर्ना लिन्छ भने पैसा खर्च गरेर जो पनि एमबिबिएस वा बिडिएस पढ्न जान पाउँथ्यो। यिनमा अधिकांश विद्यार्थी त्यस्ता हुन्थे, जो नेपालमा प्रवेश परीक्षा पास गर्न सक्दैनथे।
अिहले स्थिति त्यस्तो छैन।
डाक्टरी पढ्न विदेश जानेले पनि यहाँको कुनै विश्वविद्यालयबाट प्रवेश परीक्षा पास गरेको हुनुपर्ने नियम लागू भएपछि त्यस्ता विद्यार्थी संख्या एक हजारले घटेको छ।
मेडिकल काउन्सिलले सन् २०१६ मा उक्त नियम लागू गरेको हो। त्यसयता डाक्टरी पढ्न जाने विद्यार्थी संख्या ह्वात्तै घटेको काउन्सिलका अध्यक्ष धर्मकान्त बाँस्कोटाले बताए।
यो व्यवस्था लागू भएपछि २०१६ मा जम्मा ४ सय ७८ विद्यार्थी मात्र एमबिबिएस र बिडिएस पढ्न विदेश गए। त्यसै वर्ष स्वदेशका मेडिकल कलेजमा प्रवेश पाउने एमबिबिएस र बिडिएस विद्यार्थी संख्या भने २ हजार ५ सय हाराहारी थियो।
२०१७ मा पनि विदेश जाने संख्यामा खासै वृद्धि भएन। जम्मा ४ सय ९५ जना गए।
'पहिले पहिले यहाँका कलेजमा नाम निकाल्न नसकेकाहरु विदेश पढ्न जाँदा रहेछन्,' काउन्सिल अध्यक्ष बाँस्कोटाले सेतोपाटीसँग भने, 'हामीले विदेश जान पनि प्रवेश परीक्षा लागू गरेपछि यो संख्या घटिरहेको छ।'
चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानका डिन जगदिश अग्रवाल पनि नेपालका कलेजमा नाम निकाल्न नसक्ने र एकमुष्ट पैसा तिर्न नसक्ने विद्यार्थी विदेश जाने गरेको बताउँछन्। विदेशमा मेडिकल पढाइ यहाँभन्दा खुकुलो हुने ठानेर पनि कतिपय विद्यार्थी बाहिरिने उनको बुझाइ छ।
'पहिले नामै निकाल्न नसक्ने विद्यार्थी बाहिर जान्थे, अहिले भने यहाँको शुल्क महँगो भएर र पढाइ कडा हुने भएकाले बाहिरिन्छन्,' उनले भने।
एमबिबिएस पढ्न बाहिर जानुमा मेडिकल कलेज सञ्चालकहरूको पनि दोष छ।
सरकारले तोकेभन्दा बढी शुल्क नलिएसम्म निजी मेडिकल कलेजहरु भर्ना लिँदैनन्। प्रवेश परीक्षामा मेरिटमा परेका तर पैसा तिर्न नसक्नेहरु यही कारणले विदेश जान बाध्य हुन्छन्। सरकारले तोकेभन्दा बढी शुल्क तिर्न नमान्नेलाई भर्ना नलिएपछि कतिपय विद्यार्थी सम्बन्धित मेडिकल कलेजविरुद्ध सर्वोच्च अदालत पुगेका छन्।
अब मेडिकल कलेज चलाउन खोज्ने व्यापारीले भनेजस्तै यहाँ विद्यार्थीले पढ्नै नपाएका हुन् कि होइनन् हेरौं।
नेपालमा पढ्नै नपाएर विद्यार्थी बाहिरिएका हुन् भन्ने तर्कसँग आइओएम डिन अग्रवाल सहमत छैनन्। उनका अनुसार यहीँका मेडिकल कलेजलाई विद्यार्थी अभाव हुने गरेको छ।
'मेडिकल कलेज नै नभएर बाहिरिन्छन् भन्ने तर्क गलत हो। अहिले हामीकहाँ नै एमबिबिएस र बिडिएसमा विद्यार्थी अभाव छ,' उनले भने, 'त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट मान्यता पाएका मेडिकल कलेजमा विद्यार्थी अभाव छ, यसै वर्ष तोकिएको संख्यामा हामीले विद्यार्थी भर्न सकेनौं। कसरी यहाँ विद्यार्थी बढी हुन्छन्?'
उनका अनुसार यो वर्ष त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धनप्राप्त जानकी मेडिकल कलेज र नेसनल मेडिकल कलेजले आफूलाई प्राप्त सिटमा विद्यार्थी भर्ना गर्न सकेनन्।
जानकीले ८० सिट पाएको थियो, जसमा ४६ जना मात्र भर्ना भए। नेसनल मेडिकल कलेजले ९० सिट पाएकोमा ४५ जना मात्र नेपाली विद्यार्थी भर्ना भएका छन्। बाँकी ४५ जना विद्यार्थी विदेशी (भारतीय) हुन्। तीमध्ये कतिपयले विश्वविद्यालयको प्रवेश परीक्षा पास गरेका छैनन्।
नेसनल मेडिकलले नियमविपरित विदेशी विद्यार्थी भर्ना गरेपछि आइओएमले त्यसलाई रद्द गरेको थियो। आफूले पाएको सिट संख्यामा ७५ प्रतिशत नेपाली विद्यार्थी नै भर्ना गर्नुपर्ने र विदेशी विद्यार्थीले पनि प्रवेश परीक्षा पास गर्नैपर्ने नियम छ। नेसनल कलेज आइओएमको उक्त निर्णयविरूद्ध सर्वोच्च गएको छ।
यसअघि यसरी नै नियमविपरित विदेशी विद्यार्थी भर्ना गर्ने नेसनल लगायत अन्य कलेजलाई सर्वोच्च अदालतले छुट दिएको थियो। यसपालि पनि त्यही छुट पाइने आसमा यो कलेज सर्वोच्च गएको हो।
काठमाडौं विश्वविद्यालयले भने विदेशी विद्यार्थीलाई प्रवेश परीक्षा नलिइकनै पढाउँछ।
नेपालीको भाग खोसेर विदेशी विद्यार्थी भर्ना गर्ने मेडिकल कलेजका कारण पनि यहाँका विद्यार्थी बाहिरिने गरेको मेडिकल शिक्षाका जानकार बताउँछन्।
नेपालमा नाम निकाल्न नसकेपछि विदेश गएर पढेका धेरै विद्यार्थी डाक्टरको लाइसेन्स लिने बेला पनि फेल हुन्छन्। विदेशबाट एमबिबिएस पढेर आएका ८० प्रतिशत विद्यार्थी काउन्सिलको परीक्षामा फेल हुने अध्यक्ष बाँस्कोटाले बताए। नेपालमै पढेका भने ८० प्रतिशत पास हुन्छन्।
'३४ पटकसम्म मेडिकल काउन्सिलको लाइसेन्स परीक्षामा फेल भएका विद्यार्थी पनि विदेशबाटै एमबिबिएस पढेर आएका छन्,' उनले भने, 'कस्ता र कुन कलेजमा विद्यार्थी पढ्न गएका थिए भन्नेले अर्थ राख्छ।'
यसपालि काउन्सिलले यति धेरैचोटि प्रवेश परीक्षा दिन नपाइने नियम बनाउन खोजेको छ।
'एमबिबिएस पास गरेर आएपछि काउन्सिलमा लाइसेन्सका लागि परीक्षा दिनुपर्ने हुन्छ, हामीले १० पटकभन्दा बढी परीक्षा दिन नपाइने कानुन मस्यौदा गरी सरकारलाई बुझाएका छौं,' अध्यक्ष बाँस्कोटाले भने।
प्रकाशित मिति: बुधबार, असार २७, २०७५, १२:१३:००